စုချစ်သူ: IP Man နှင့် မရွှေစုအတွေးများ
IP Man နှင့် မရွှေစုအတွေးများ
မနေ့ညက ဘူကစ်ဘတုတ် အမ်အာတီဘက်ကို လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းဘေးကွင်းပြင်ကျယ်မှာ ရုပ်ရှင်ပြနေတာတွေ့လို့ ခဏတဖြုတ် ရပ်ကြည့်မိတယ်။ မရွှေစုက ရုပ်ရှင်ဆို တော်ရုံမကြိုက်တာမို့ ခဏဆိုပြီး ရပ်ကြည့်ပေမယ့် ရုပ်ရှင်က ဆွဲဆောင်မှုကြောင့် စိတ်ဓါတ်တက်ကြွလာတာနဲ့ အပြီးအထိ ကြည့်မိတော့တယ်။
ဘာကားလဲလို့ စပ်စုကြည့်မိတော့ IP man2တဲ့။ လက်ဝှေ့ကားတွေဆို ပိုလို့တောင် မကြည့်တတ်တဲ့ မရွှေစုကို ဒီကားလေးကတော့ အပြီးထိ ကြည့်မိအောင် ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူထဲက လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မရွှေစုရဲ့ basic instinct က မတရားတာကို မခံစားနိုင်လို့ပါပဲ။ အဲဒီ မတရားတာကို မခံစားတတ်တဲ့ အသိစိတ်ဓါတ်ကလည်း အမေစုပြောသလို နိုင်ငံရေးတမျိုးပဲ မဟုတ်ပါလား။
မရွှေစုတို့ စကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ရုပ်ရှင်က အလယ်လောက် ရောက်နေပါပြီ။ ဟောင်ကောင် ဖိုက်တာမင်းသားကြီးဟုတ်ချင်းပေါင်နဲ့ နိုင်ငံခြားသား လက်ဝှေ့သမား လက်ဝှေ့ထိုးနေကြတဲ့အခန်း။ နိုင်ငံခြားသား လက်ဝှေ့သမား Twister ရဲ့ သရော်မော်ကား ပြောစကားများနဲ့ မတရားစော်ကားမှုကို မခံနိုင်လို့ ရှုံးမယ်မှန်းသိရက်နဲ့ မိမိယုံကြည်မှုကို သေတဲ့အထိ ဖက်တွယ်ပြီး သတ္တိရှိရှိ တုန့်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဟုတ်ချင်းပေါင်။ သတင်းမှန်ကို ရေးမိလို့ အဲဒီအချိန်က အုပ်စိုးနေတဲ့ မျက်နှာဖြူဟောင်ကောင်ပုလိပ်ရဲ့ မတရားနှိပ်စက်မှုကိုခံရတဲ့ သတင်းသမား။ လက်ဝှေ့ပွဲမှာ မတရားသဖြင့် အသေထိုးသတ်ခဲ့လို့ သေခဲ့ရတာကို မတော်တဆ ဖြစ်တာပါလို့ အရှက်မရှိ ပြောင်ညာတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ။ ပြီးတော့ Twister ရဲ့ သူတပါးကို အထင်အမြင်သေး မလေးမစား မရိုးသားတဲ့ အောက်တန်းကျကျ စိန်ခေါ်မှု။ အော်... လောကကြီးမှာ Twister လိုလူမျိုးတွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ မရွှေစုတို့လည်း သိထားသားပဲ။ အဲဒါတွေကိုကြည့်ပြီး မရွှေစုဟာ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့သူ တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ရင်ထဲမှာ အော်ဂလီဆန် မုန်းတီးစက်ဆုတ်မှုတွေ အပြည့်နဲ့ လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်လို့။ မရွှေစုမျက်လုံးထဲမှာ ကြည့်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ဟာ ရုပ်ရှင်မဟုတ်တော့ဘူး။ ရုပ်ရှင်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်နေတာတွေက အရိပ်အနေနဲ့ ရင်ထဲထိရောက်လာတယ်။
IP man က Twister ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံခဲ့ပြီး လက်ဝှေ့ထိုးတဲ့နေ့ကို ရောက်လာတယ်။ ဒိုင်လူကြီးက to the corner လို့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကို ချက်ချင်းမတုံ့ပြန်တော့ ၀ိုင်းဝန်းလှောင်ရယ်ရယ်ကြတဲ့ မျက်နှာဖြူ ပရိတ်သတ်ဟာ ရေပေါ်ဆီ လူအချို့ကို ကိုယ်စားပြုနေတယ်။ Twister ရဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထီမထင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ပေါ့ပျက်ပျက်မျက်နှာဟာ လောကကြီးထဲက မရိုးမသား ကောက်ကျစ်တဲ့ လူတန်းစားတစုကို ကိုယ်စားပြုနေတယ်။ ပွဲကြည့်စင်အောက်က စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှု မျက်ဝန်းတွေနဲ့ IP man ကို အားကိုးတကြီး ကြည့်နေကြတဲ့ပရိတ်တွေက ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုနေတယ်။ မွေးကင်းစသားငယ်ကို ပိုက်ပြီး၊ သားကြီးနဲ့အတူ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ မိခင်ဟာ မျိုးဆက်သစ်နဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်းကို စောင့်ရှောက်လျက်ရှိတဲ့ မိခင်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုနေတယ်။
IP man ရဲ့ ရဲရင့်သတ္တိအပြည့်နဲ့ တည်ငြိမ် အေးချမ်း ရိုးသားတဲ့ အကြည့်ဟာ မရွှေစုရင်ထဲက သူရဲကောင်းများကို ကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ လက်ဝှေ့ပွဲက စပါပြီ။ IP man ဟာ ရက်စက်ပြီး ညှာတာမှုမရှိတဲ့ Twister ရဲ့ လက်သီးမိုးများကြားမှာ ခဏခဏ လဲကျခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ကြိုးဝိုင်းအတွင်းက ခွင့်ပြုထားတဲ့ ဂဏန်း အရေအတွက် ၉ခု မတိုင်ခင် မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲသတ္တိအပြည့်နဲ့ ပြန်ထနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဟုတ်တယ်။ မရွှေစုတို့ ဘ၀မှာလည်း ဒီလိုပဲ ခဏ ခဏ လဲကျကြမှာပဲ။ လောကကြီးက ခွင့်ပေးထားတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း သတ္တိရှိရှိ ပြန်ထနိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာပဲ။ အဲသလိုမှ ပြန်မထနိုင်ရင် မရွှေစုတို့ဟာ အဲဒီလက်ရှိကြိုးဝိုင်းမှာ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရတော့မှာပဲ။ IP man ဟာ ကောက်ကျစ်တဲ့ Twister ကို ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန် ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ မရွှေစုတို့လည်း ဘယ်သူက ဘယ်လိုပဲ ကောက်ကျစ်ပစေ ကိုယ့်ဘက်က ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ ကျင့်ကြံကြရမှာပဲ။
ဥပဒေဟာ အာဏာရှိသူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိတယ်လို့ ပြောကြတဲ့အတိုင်း ပွဲရပ် အချက်ပေးခေါင်းလောင်းထိုးပြီးမှ အခွင့်ကောင်းယူပြီး လက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့ Twister ကို ဒိုင်လူကြီးတွေက အရေးမယူကြဘူး။ ဒီလိုပဲ လောကကြီးမှာ ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်တဲ့ သဘာဝမကျစွာ မတရားမှုတွေက တခါတခါ ကိုယ့်ကို အလစ်ချောင်းပြီး လာတိုက်ခိုတ်တတ်တာကို သတိပြုရမယ်။ IP man ကိုတော့ ကြိုးဝိုင်းအတွင်း ခြေထောက်နဲ့ ကန်တာ ခွင့်မပြုဘူးလို့ ပိတ်ပင်ပါတယ်။ IP man ဟာ သူတို့ တောင်းဆိုတာကို ဘာမှ စောဒက မတက်ဘူး။ ရဲရင့်မှန်ကန်တဲ့ သူရဲကောင်းတွေဟာ နောက်ဆုံးမှာ အောင်မြင်မှု ရကြတယ်ဆိုတဲ့ လောကကြီးရဲ့ နိယာမအတိုင်း သူဟာ ကောက်ကျစ်တဲ့ Twister ကို မှန်မှန်ကန်ကန် အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။
မရွှေစု အကြိုက်ဆုံးကတော့ အနိုင်ရရှိတဲ့ IP man ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးတွေပါပဲ။ Twister ဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေကို သူနဲ့ ပြိုင်ဖို့ စိန်ခေါ်တဲ့အခါ အနောက်တိုင်းလက်ဝှေ့ ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း မင်းတို့ ငနုံငအတွေ သိစေရမယ်။ အသုံးမကျတဲ့ မင်းတို့ တရုတ်သိုင်း အဖြစ်မရှိကြောင်း သိစေရမယ်လို့ သရော်မော်ကား ပြောခဲ့တယ်။ IP man က သူအနိုင်ရရှိတဲ့အခါ Twister စကားကို ချေပဖို့ ခေါင်းထဲမှာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ သူ ပြောခဲ့တာကတော့....
I didn't come here today to prove which is better, Chinese or Western Boxing.
Although people have different status in life, I don't believe that one person integrity is worth more than another.
I hope we can start to respect each other.
အဲဒီအခါ ခုနက သူ့ကို ၀ိုင်းဝန်းလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတဲ့ မျက်နှာဖြူပရိတ်သတ်ဟာ မနေသာတော့ပဲ နေရာကထ မတ်တတ်ရပ်ပြီး အားလုံးလက်ခုတ်ဝိုင်းတီးကြပါတယ်။ မရွှေစုဟာလည်း ယောင်ရမ်းပြီး လက်ခုတ်တွေတီးနေမိတယ်။ ဟုတ်တယ်။ မရွှေစုတို့ဟာ ကိုယ်နဲ့ စိတ်ဓါတ်ချင်းမတူတဲ့သူတွေရဲ့ အပြောကို အရေးယူပြီး ချေပနေဖို့ မလိုဘူး။ ကိုယ်သွားတဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း ကိုယ့်စံအတိုင်း ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန် ရိုးရိုးသားသား နေသွားကြဖို့ပဲ အရေးကြီးပြီး ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ သူမျိုး ဖြစ်နိုင်ရမယ်။
အော်... အဲဒီလိုများ မရွှေစုတို့ လူသားတွေ အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးစားတတ်ကြမယ်ဆိုရင် လောကကြီးမှာ ဘယ်လောက်များ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းလိုက်မလဲလို့...။
Ref: IP Man2Movie
၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀
Posted by စုချစ် at 11/20/2010 05:25:00 PM
Labels: Essay, Movie Review, Thoughts
လူတိုင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးစားသင့်ပါတယ် ဒါဆိုရင် ပျော်စရာ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာမယ် ထင်ပါတယ်
လူအချင်းချင်း နှိမ့်ချခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ
Waiting the 2011 Calendar....:P
I Hop we can start to respect each other.
Right I agree with.
ရင်ထဲရောက်သော အမေစု စကားများ
ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ ဟာသ-ရသ ကဗျာ-ပုံပြင်များ
မင်းသား ကျော်သူ နှင့် လူမှုရေးရှေ့ဆောင်လမ်းပြ .......